इप्रका बगनाहा भुरिगाउँको नाममा रहेको जग्गा फिल्डबुक बाटै हरायो | BARDIYA ONLINE |
इलाका प्रहरी कार्यालय बगनाहा, भुरीगाउँको नाममा रहेको जग्गा मालपोत र नापि कार्यलयको फिल्डबुक बाटै हराएको छ । ठाकुरबाबा नगरपालीका वडा नं. १ र २ को सीमामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यलय बगनाहा, भुरिगाउको जग्गा प्रहरीले खोजी गर्दा मालपोतको फिल्ड बुकमै नदेखीएको हो ।
२०५६ सालमा इलाका प्रहरी कार्यालय बगनाहाको नाममा रहेको कित्ता नं. ३७ र ३८ को २ बिघा १३ कट्ठा जग्गा अभिलेखमा उल्लेख भए पनि फिल्ड बुकमा नभएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । द्वन्दकालमा कार्यालय ध्वस्त भएपछि जग्गाको खोजी भएको थिएन । पछिल्लो पटक प्रहरीले नापी गर्दा कित्ता नम्बर ३८ मा मात्र १२ कट्ठा जग्गा देखीएको प्रहरी निरीक्षक प्रदिपकुमार डिसीले जानकारी दिए । २ बिघा १ कट्ठा जग्गा स्रोतमा भेटिएको छैन ।
२०५८ चैत्रमा तत्कालिन माओबादीले इलाका प्रहरी कार्यालयमा बम विस्फोट गरी क्षति पु¥याएपछि हालसम्म पुनर्निर्माण गरिएको छैन । प्रहरीले पुनर्निर्माणको तयारी गरिरहेको अबस्थामा जग्गा खोजी गर्दा नभेटिएपछि मालपोत कार्यालय र नापीमा निवेदन दर्ता गराईएको छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले उक्त जग्गा खारेज गरेका कारण फिल्ड बुकमा नदेखीएको बताएको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख राम कुमार रोकायले फिल्ड बुकमा जग्गा नदेखीएकाले पुर्जा पेस गरेपछि स्रेस्ता गर्न सकिने बताए ।
पुर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिया राष्ट्रीय निकुञ्नसंग जोडिएको भुरीगाउँ सुरक्षका दृष्टीले अति संबेदनशील मानिन्छ । प्रहरी निरीक्षक सहित २९ जनाको दरबन्दी रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय बगनाहा भुरीगाउँ २०६४ साल देखी भाडाको घरमा बस्दै आएको छ । भाडाको घर जीर्ण भएकाले आफ्नै भवन निर्माणका लागी जग्गा खोज्दा नभेटिएकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।